Dowladda oo kooxo dhakhaatiir u direysa Gobolada Dalka | Universal Somali TV
Dowladda Somaliya ayaa waxay dhakhaatiir caafimaad u direysaa Gobolada Dalka, si ay ugula tacaalayaan xanuunka COVID-19, oo qaybo ka mida gobolada ku faafaya.
Inkastoo xaaladaha COVID-19 ee Magaalada Muqdisho uu hoos u dhac ku yimid ayuu xanuunka ku fidayaa qaar ka mid ah Gobolada Dalka, taasoo ay dareen ka muujisay dowladda.
Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye), Wasiirka Warfaafinta Somaliya oo Saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in la go'aamiyay in Gobolada Dalka loo gurmado, si khibradda laga helay Magaalada Muqdisho looga faa'iideeyo.
"Waxaa la go'aamiyay in dowladda oo dhami ay gobolada ka hawlgasho, haddii xanuunka gobolada inteeda kale ay hadda saamayntiisa ku badatay, Dowladda Dhexe inay Maamul Goboleedyada kala qayb qaadato khibraddii halkaan laga helay, xagga wecyigelinta, xagga isbitaalada, taakuleynta dadka xanuunku asiibo iyo sidii looga hortaggi lahaa xanuunka dadka magaalooyinka degan iyo dhammaan Gobolada Dalka." Ayuu yiri Wasiirka.
Wasiirka ayaa yiri "Ra'iisal Wasaaruhu wuxuu amray dhammaan intii ka shaqeyneysay xaaladda xanuunka Coronavirus inay u baxaan Gobolada Dalka, oo loo gurmado. Kooxo dhakhaatiira ayaa loo diri doonnaa Maamul Goboleedyada iyo Gobolada Dalka, magaalo madaxda meelaha dadku ku badan yahay."
Wasiir Maareeye ayaa ugu dambeen yiri "Anaguna wecyigelin ahaan sidaasoo kale ayaan kooxo diri doonnaa, Gobolada Dalka oo dhan tagga oo Maamulada halkaa ka jira, Wasaaradaha Warfaafinta iyo Wasaaradaha Caafimaadka kala qayb qaata inay dadweynaha wecyigeliyan, qofkii xanuunsana caawiya."
Kan-xigaYuusuf Garaad oo baaq u jeediyay Baar...
Kan-horeMadaxweynaha Galmudug oo gaaray Magaa...
54,019,095 unique visits